रोजिना पण्डित - मनोरन्जन - नारी
पुस ९, २०७७ फेसन के हो ?
फेसनले हरेक फरक व्यक्तित्वको पहिचान प्रस्तुत गर्छ । हजारौंको भीडमा कुनै व्यक्ति कसरी अरूभन्दा भिन्न भन्ने देखाउँछ । साथै मानिसको व्यक्तित्वको अनुमान गर्न पनि फेसनले सहयोग गर्छ ।
नेपाली फेसन डिजाइनिङको स्तर कहाँ देख्नुहुन्छ ?
प्रत्येक घरमा फेसनप्रति सचेतना बढ्नुका साथै डिजाइनिङप्रति मानिसको चाहना पनि बढ्दो छ । यहाँका पहिरनमा देखिने कलात्मक प्रस्तुतिले नेपाली फेसन डिजाइनिङको गुणस्तरमा वृद्धि भएजस्तो लाग्छ ।
डिजाइनिङ र स्टाइलिङमा के फरक छ ?
स्टाइल र फेसन उस्तै लागे तापनि यी दुई भिन्न छन् । स्टाइलले बाहिरी आवरण वा प्रस्तुति भन्ने बुझिन्छ । डिजाइनिङले बाहिरी आवरणसँगै उद्देश्य र विस्तृतीकरणका साथ गरिने योजना भन्ने बुझिन्छ ।
अरूलाई स्टाइलिस बनाउने मान्छे आफू स्टाइलिस देखिन के गर्नुहुन्छ ?
म फेसन, सौन्दर्य तथा शिक्षण पेसामा समेत संलग्न भएकाले न्यूट्र्रल मेकअप र सेमी फर्मल पहिरनमा बढी सहज महसुस गर्छु । त्यही किसिमका पहिरन म लगाउँछु ।
नेपाली फेसन सेन्समा तपाईंले देख्नुभएको त्रुटि के हो ?
फेसनको नाममा चारभन्दा बढी रंगका पहिरन एकैचोटी प्रयोग गर्ने र शारीरिक बनावटअनुसार पहिरन नमिलाई लगाउँदा शारीरिक बनावटमा भएका कमी–कमजोरीलाई झनै दर्साउँछ । यही नै त्रुटि हो जस्तो लाग्छ ।
कसका लागि कस्तो डिजाइनिङ गर्ने रहर छ ?
नायिका प्रियंका कार्कीका लागि एभान्ट–ग्रेड डिजाइन गर्ने रहर छ ।
स्टाइलिस्ट सेलिब्रेटी ? किन ?
प्रियंका कार्की । जसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो एकदमै आकर्षक र सुरुचिपूर्ण लाग्छ ।
अप्ठ्यारो लाग्ने ड्रेसअप गरेको कुनै क्षण ? कुन इभेन्टमा के लगाउनुभएको थियो ?
सन् २०१८ मोडल हन्ट नेपाल इभेन्टमा डिजाइनरहरूका लागि सल्लाहकारका रूपमा आबद्ध थिएँ । उक्त इभेन्टमा मैले सुनौलो र कालो रंगको अफ सोल्डर ड्रेस, हिपको दुवैतर्फ टेल जुन अगाडि ल्याएर बाँध्ने डिजाइन थियो तर अगाडि बाँध्दा अलि अप्ठ्यारो लागेको थियो । अहिले सम्झिदा हाँसो उठ्छ ।
मेकअपमा तपाईंलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने पक्ष के हो ?
मेकअप मेरो जीवनको रमाइलो पाटो हो । मेकअप गर्दा खुसी र आत्मविश्वासी महसुस गर्छु । आफ्नो मेकअप गर्दा ब्लस सधै लगाउँछु । यसले प्राकृतिक, सुन्दर र स्वस्थ देखाउँछ ।
कुनै एउटै सौन्दर्य प्रसाधन जसको अभावमा तपाईंले गरेको मेकअप अधूरो हुन्छ ?
फल्स ल्यासेज, यो बिना मेकअप अधूरो देखिन्छ ।
कुनै तीनवटा सौन्दर्य प्रसाधन जसको प्रयोगबिना महिला घरबाहिर निस्कदैनन् ?
मोइस्चराइजर, सन ब्लक क्रिम, लिपिस्टिक ।
कुनै महत्वपूर्ण सौन्दर्यमन्त्र जुन सम्पूर्ण महिलालाई तपाईं सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरा लागि सौन्दर्य भनेको स्वस्थ जीवन अनि सकारात्मक सोच हो । त्यसैले सम्पूर्ण महिलालाई भरपूर मात्रामा पानी पिउन, छालाको हेरचाह गर्न र दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।
आश्विन ३, २०७६ - रोजिना मिस टुरिज्म वल्र्डमा
विपिन कार्की, अभिनेता फाल्गुन ११, २०७७
के गर्छन् पुराना नायिका ? फाल्गुन ९, २०७७
‘तिमी मेरो पूजा’ गीत सार्वजनिक फाल्गुन ७, २०७७
चलचित्रमा फेरिँदै पहिरन माघ २०, २०७७